Momba anay - Qinhuangdao Yongyu Glass Products Co., Ltd.
Yongyu Glass, safidinao tsara indrindra amin'ny fananganana vokatra fitaterana entana avy any Sina.
Niorina tamin'ny orinasa Gavin Pan ny orinasa, izay niasa tao amin'ny indostria fitaratra hatramin'ny 2006 ary manana traikefa fanondranana mihoatra ny 10 taona. Yongyu Glass dia mpikambana ao amin'ny Vondrona Amerikanina Rink Association. Ny fahitantsika dia ny mizara ny tombontsoa azo ampitahaina amin'ny indostrian'ny marika maritrano mararin'i Shina amin'ny mpanjifa, ny hanomezana mpanjifa vahaolana lafo vidy, ary hahatratrarana ny fiaraha-miasa mandresy amin'ny mpanjifa.
Izahay dia nandray anjara tamin'ny indostrian'ny tranon'ny fitaratra ary nanompo ny mpanjifanay na avy any Chine na any ivelany. Hitanay ny vahaolana natokana ho an'ny fangatahan'ny mpanjifa, manampy ny mpanjifa hamonjy ny fotoana sy ny vola.
1) Vary fitaratra U (fitaratra faran-tsaratra ambany U, fitaratra ny mombamomba ny U, fitaratra profil profil U)
2） SGP fitaratra laminated misy alalana Dupont
3) fitaratra azo antoka Jumbo (fitaratra misy rano ao Jumbo, fitaratra llamated Jumbo, Jumbo IGU)
4) fitaratra azo antoka (fitaratra misy fantsom-bolo, vera miloko matevina, jumbo miorina amin'ny fitaratra vera 12,5 metatra ny haavony)
5) fitaratra Sart (Gauzy PDLC / SPD, haingam-pandeha avo lenta> 86%, PVB interlayer mety amin'ny fampiasana anatiny sy ivelany)
Izahay dia mpamatsy SGCC & CE nankatoavina, mifanaraka amin'ny fenitra fototry ny fananganana vokatra fitaratra ny vokatrao. Ny serasera mety, ny fizotran'ny famokarana manontolo dia azo zahana indray, 7 * 24h a service-barc-varotra no toky nantenaintsika.
Manambatra loharano tsara kokoa ， hanome vahaolana ho anao manokana
Mandresy an'izao tontolo izao ny kalitao, zava-bita amin'ny serivisy amin'ny ho avy
Ny iraka nataonay:
Miara-miasa hahatratrarana fandresena, mamorona fahitana mangarahara!